Studio "Aloha" Anggresse - I-Airbnb
Studio "Aloha" Anggresse
Angresse, Nouvelle-Aquitaine, i-France
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Franck
U-Franck uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Feb 26.
(Ukuqasha okungenani iviki elingu-1 ukusuka ngoMgqibelo ukuya ngoMgqibelo ngoJulayi no-Agasti.
Futhi ubuncane bezinsuku ezi-2 ngoSepthemba)
Indawo yokuhlala enesitudiyo ebukekayo nezimele endlini yomndeni enengadi nethala, amakhilomitha ayi-5 ukusuka eLake Hossegor kanye ne-6 km ukusuka ogwini olunesihlabathi lwaseSeignosse naseHossegor, kanye nemizuzu engama-30 ukusuka eBiarritz. Isitudiyo esilungele izithandani noma izithandani ezinosana olu-1 olufisa ukujabulela ukuzola kwedolobhana elinezitolo eduze nolwandle.
Le ndawo ingakwazi ukuhlalisa abantu abadala abangu-2 nojahidada ngoba inombhede ophindwe kabili (140cmX 200cm) kanye nombhede owengeziwe wengane eyodwa kusofa ophenduka umatilasi phansi. Akukho kubhema esitudiyo, kuvunyelwe ethafeni, akukho zilwane, indawo yokupaka izimoto engenzeka ngaphambi kwestudio ukuze kuthulwe bese kunconywa emgwaqeni ongemuva kwendlu enkulu.
Ukufinyelela ku-studio ngethala elinezinyathelo ezincane ezi-3. Izitolo ezihamba ngezinyawo endaweni eyi-5min (Indawo yokubhaka, i-caterer, i-greengrocer, iposi, indawo yokwenza izinwele, ugwayi, ibha kanye ne-pizzeria yokudlela).
Futhi ama-slide nama-slide ezingane
Isisetshenziswa: umbhede double, 1 usofa embhedeni 1 indawo ingane, Ikhishi ifakwe 2 hobs ngobumba, efrijini, usinki, extractor, microwave, izitsha kanye Cutlery, abenzi ikhofi, itafula engadini, izihlalo, yokugezela nge ezinkulu Italian eshaweni, WC nosinki . I-plancha kagesi encane kuthala elizimele
Ikhithi encane yokuqalisa inikezwa: uketshezi lokugeza izitsha, isipontshi, amashidi, amathawula, amathawula etiye.
ubusuku obungu-7 e- Angresse
Indawo yokuhlala ethulile, idolobhana elinomzila wokuqina, indawo yokudlala yezingane, inkundla yethenisi kanye ne-pediment.
Izitolo ezihamba ngezinyawo edolobhaneni (ibhikawozi, isitolo sokudla, i-greengrocer, iposi, indawo yokwenza izinwele, ugwayi, ibha kanye ne-pizzeria yokudlela).
Izitolo ezinkulu nezitolo imizuzu emi-5 e-Soorts-Hossegor futhi manje iSuper U enkulu edolobheni enendawo yokuwasha negalaji likaphethiloli.
Hlola ezinye izinketho ezise- Angresse namaphethelo